Castle Falls (2021) – MM Subtitles
Video Sources 6847 Views Report Error
Get in. Get the cash. Get out alive.Dec. 03, 2021USA89 Min.Not Rated
ရစ်ချတ်အယ်ရစ်ဆင်ဟာ ထောင်အမှုထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကင်ဆာဝေဒနာသည်သမီးငယ်ရဲ့ကုသစရိတ်အတွက်ခေါင်းခဲနေရပါတယ်၊ သူ့အတွက်ဘယ်လိုမှလက်လှမ်းမမှီတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုအချိန်မှီ မရှာဖွေနိုင်ရင် သမီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ငွေကိုအရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
မိုက်ခ်ကတော့ တစ်ချိန်က MMA အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့အနားယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ ရရာအလုပ်တွေဝင်လုပ်နေပြီးကတ်စတယ်ဖောဆိုတဲ့ ဖြိုဖျက်တော့မယ့်ဆေးရုံဟောင်းကြီးတစ်ခုထဲကိုအလုပ်ကြမ်းအဖွဲ့နဲ့အတူရောက်နေပါတယ်။
ရစ်ချတ်ရဲ့အကျဉ်းထောင်အတွင်းက မူးယစ်ကုန်သည်တစ်ဦးက သူ့ငွေတွေမီလျံချီပြီး ကတ်စတယ်ဖောဆေးရုံမှာဝှက်ထားကြောင်းသတင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာငွေအသည်းအသန်လိုနေတဲ့ ရစ်ချတ်တစ်ယောက် အဲ့ဒီငွေတွေကိုလာရှာခဲ့သလို၊ အဲ့ဒီငွေတွေကိုလက်ဝယ်ရထားတဲ့ မိုက်ခ်၊ ထောင်ထဲကမူးယစ်မှောင်ခိုသမားလွှတ်လိုက်တဲ့ သူ့ညီနဲ့လက်နက်ကိုင်တစ်စုတို့ဟာဒီငွေတွေအတွက် အသက်လုရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ရပါတော့တယ်။
သတ်ပုတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ပညာပိုင်းမှာ ဝါရင့်ဆရာအဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ Dolph Lundgren နဲ့ Scott Adkins တို့ မင်းသားကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ အားပြိုင်ခန်းကိုမှ အထူးပြုလုပ်ချက်အားကိုးမထားပဲလက်တွေ့သဘာဝကျတဲ့ အက်ရှင်တွေနဲ့ရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Duration……..: 1h 27m
Download 720p Solid Drive 547 MB